2 083 ပွတ်။
မှတ်ချက်: လည်ဆွဲကျည်ဆံ costomes မှာရပ်တန့်နိုင်ပါနှင့်သူတို့၏ဦးတည်ရာမှကယ်နှုတ်မည်မဟုတ်ပါ။ အဝတ်အချည်းစည်းဣသရေလအမျိုးကို directory ကိုတာဝန်မယူသည်နှင့်ပြန်လာပါဘူးနှင့်ကျည်ဆံရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကယ်လွှတ်မပေးလျှင်လျော်ကြေးငွေပေးဆောင်ကြပါဘူး။
ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအကြှနျုပျတို့သညျထံသို့ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်အများကြီးဒီ Golani ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်ကျည်ဆံဆွဲပြားကြိုက်တယ်! သပိတ်ပင်က "Golani" တပ်မဟာ၏တရားဝင်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဲ့ထိန်းတပ်ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ဝသကဲ့သို့အစစ်အမှန်ကျည်ဆံတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျည်ဆံ, သင်တန်း, ဿုံပွတ်ယင်းအမှုန့်သွန်။ ဤသည်အေးမြအစ္စရေးကျည်ဆံဆွဲပြားအစ္စရေးစစ်တပ်မှ၏အကျော်ကြားဆုံးခြေလျင်ယူနစ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ ဤအငြိမ်ဆုံးပဲပါ! ဤရွေ့ကားကျည်ဆံတွေရပ်ဆိုင်းမှုစစ်မှန်အစ္စရေးအစားအစာ။ သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာခရီးသွားဧည့်မှအကြိုက်ဆုံးအစ္စရေးအမှတ်တရပစ္စည်းများကဲ့သို့ရပ်ဆိုင်းမှု။ ဒါဟာပေါ်ပြူလာလက်ဆောင်တစ်ခုပစ္စည်းကွင်းဆက်ကြေးနီဘောလုံးကိုပါဝင်သည်။
2 223 ပွတ်။
1 945 ပွတ်။